🥇 ▷ Tani waa waxa qaabka mugdiga ah ee WhatsApp u eg yahay desktop-ka ✅
Tani waa waxa qaabka mugdiga ah ee WhatsApp u eg yahay desktop-ka
Mid ka mid ah astaamaha aadka loo filayo ee WhatsApp (iyo kuma eka oo keliya aaladda moobiilka) waa, iyada oo aan shaki ku jirin, isku darista habka mugdiga ah. In kasta oo labadaba Android iyo macruufka yihiin beta, marka lagu daro qeyb ka mid ah koodhka shabakadda, habka mugdiga ayaa la heli karaa, ilaa hadda garan mayno goorta ay hawshani imaan doonto (ama hadaan rabo) desktop-ka.
Hadda qaar ka mid ah adeegsadayaasha XDA waxay soo sheegaan in habka mugdiga ah ee WhatsApp uu sidoo kale diyaar yahay, qeyb ahaan, nooca desktop-ka, oo aan wax intaas ka badneyn ka aheyn WhatsApp Web Web. laakiin leh is dhex galka nidaamka oo leh howlo u gaar ah.
Runtu waxay tahay in waqti dhow ama ka dib, imaatinka mod u saamaxaya in si aan rasmi aheyn loo hawlgalo, WhatsApp mugdiga ah ayaa laga heli doonaa desktop-ka. Dareenkan, isla barnaamijka program mugdiga ah wuxuu noqday qofka laga helay tixraaca code codsi ee habka mugdiga ah ee WhatsApp.
Koodh ka kooban shaqadan. Waxay u muuqataa nooca ugu dambeeya ee desktop desktop (v0.4.930) oo si gaar ah loola jeedaa farqiyada alaabada ee mowduuc madoow oo asli ah oo loogu talagalay WhatsApp. Sidoo kale, sida aad ka arki karto shaashada shaashad sameeyaha, WhatsApp madal desktop desktop madoow aad ayuu ula mid yahay mawduuca mugdiga ah ee Android.
Xusuusnow in astaantan wali uu ku jiro horumar isla markaana WhatsApp laga yaabo inay isbeddelo badan sameyso ka hor inta aan loo sii deyn dadweynaha.
👇 Dheeraad ah dhiig-karka